Nagu saabsan - Pingxiang JinPing Fireworks Manufacturing Co., LTD
2 shell qolof bandhig taxane ah
2.5 shell qolof bandhig taxane ah
3 shell qolof bandhig taxane ah
4 shell qolof bandhig taxane ah
5 shell qolof bandhig taxane ah
6 shell qolof bandhig taxane ah
8 shell qolof bandhig taxane ah
4 ″ taxane qolofta Jabaan
5 ″ taxane qolof ah qaabka Jabbaan
6 ″ taxane qolof ah qaabka Jabbaan
8 ″ taxane qolof japan ah
2 shell qolof silsilad ah
3 shell qolof silsilad ah
4 shell taxane qolof silsilad ah
Keeg xirfadle ah
Keeg qaabeeya Fan
Z keeg qaabaysan
W keeg qaabaysan
Keeg biyo ah
Keeg saf ah
Shumaca 1 ″ 8s
Shumaca 1.2 ″ 8s
Shumaca 1.5 ″ 8s
Shumaca 1.9 ″ 8s
Shumaca 2 ″ 8s
Shumaca 2.5 ″ 6s
Shumaca hal xabbo
1.2 can hal shumac shumac ah
1.5 ″ shumac hal xabbo ah
2 ″ hal shumac shumac ah
2.5 ″ shumac hal xabbo ah
Wheel iyo Waterfall
Tuubo Fibre ah
Fiyuuska dib u dhig
Pingxiang JinPing rashka Warshadaha Co., LTD
Kan ka horeeyey ee Pingxiang Jinping Fireworks Manufacturing Co., Ltd. wuxuu ahaa "Tongmu dhoofinta rashka warshadaha" oo la aas aasay sanadkii 1968. Warshada dhoofinta dhoofinta ee Tongmu waxay ganacsigeeda ka biloowday aqoon isweydaarsi, in ka badan 50 sano oo horumar joogto ahna ka dib, si tartiib tartiib ah ayey u horumartay soo saarista rashka si fiican loo yaqaan, oo ah midka ugu weyn ee dhoofinta rashka Shiinaha.
Waqtigan xaadirka ah, aagga warshadda shirkaddu waxay gaadhay in ka badan 666,666 m2. Maaddaama ay tahay shirkad aad u wanaagsan soo saarista rashka Shiinaha, shirkaddu waxay leedahay in ka badan 600 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan in ka badan 30 farsamo yaqaanno ah.
XAALADDA GANACSATADA SHIRKADDA
Shirkaddu waxay bixin kartaa in ka badan 3,000 oo nooc oo ah walxaha rashka: qolofyada la soo bandhigo, keega, rashka la isku daro, shumacyo roman ah, qolofka ka hortagga shimbiraha iwm. Koonfur-bari Aasiya, Afrika, iyo Bariga Dhexe. Macaamiisha waxay ku qanacsan yihiin alaabta rashkeena, sababtoo ah saameyno kala duwan oo soo jiidasho leh, qiimo tartan iyo tayo sare leh oo deggan.
Maanta ， oo leh in ka badan 666,666 m2 oo ah aagga wax soo saarka, iyo in ka badan 600 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan in ka badan 30 farsamoyaqaanno, shirkaddu waxay ku soo korortay mid ka mid ah soosaarida rashka ugu waaweyn uguna horumarsan Shiinaha. Kooxda xirfadleyda ah ee wax ku oolka ah waxay siinayaan adeegga ugu fiican macaamiisheenna adduunka oo idil.
QOFKA GUUD AH
Shirkaddu waxay leedahay kooxda farsamada gacanta, oo leh in kabadan 30 farsamo yaqaanno, oo ay kujiraan 4 injineero sare iyo 6 injineero dhexdhexaad ah. In ka badan 100 badeecooyin cusub ayaa la soo saaraa sanad kasta.
Isla mar ahaantaana, alaabooyinka shirkaddu waxay ku guuleysteen rashyo badan oo ajnabi ah oo muujinaya abaalmarinno, waana shirkadda loo qoondeeyey inay soo saarto rashka maalinta Qaranka iyo dabaaldegga sannadka cusub ee Maraykanka, Japan, Faransiiska, Isbaanishka, Talyaaniga.
Bishii Diseembar 2001, waxaa si rasmi ah loogu beddelay "Pingxiang Jinping Fireworks Manufacturing Co., Ltd.".
Ku guuleystay Abaalmarinta Tayada Duqa Degmada Shangli ee 2017 iyo Abaalmarinta Tayada Duqa Magaalada Pingxiang ee 2018.
Sannadkii 2019-kii, shirkaddu waxay bixisay in ka badan 17 milyan oo yuan oo canshuur ah, bixinta canshuurta wadarta shirkaddu waxay ka badatay 100 milyan oo yuan.
Heerka farsamo ee shirkadda iyo nidaamka xakamaynta tayada ayaa ku jirta heerka hoggaaminta warshadaha
Cinwaanka:MaLing, TongMu Town, Degmada Shangli, Pingxiang City, Gobolka Jiangxi, Shiinaha
Telefoonka:0086-791-86496682 / 86392558
E-mayl iibka @ brightpy. com